ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် လူနာ ဟုတ်မဟုတ်စစ်မေးမိလို့ ရာအိမ်မှုးမိသားစုကို အုပ်စုလိုက် ဓား နဲ့ ၀င်ခုတ်၊ (၁)ဦးသေဆုံး – Na Pann San
Covidလူနာ ဟုတ်မဟုတ် မေးတဲ့ ရာအိမ်မှုး မိသားစု ကို ဓားနဲ့ခုတ်လို့သေရတ်- ယုတ်မာချက်ဗျာ အနိုင်ကျင့် လူသတ်မှုမှာ သတ်သူမောင်အေး ကိုဘာ့ကြောင့် မဖမ်းတာလည်း ဆိုတာမြို့ လူထုကမေးနေကြ ပါပြီ—ငွေရှိရင် လူသတ် လို့ရပါလား ….
ငွေချမ်းသာသူက လူမိုက် ဆန်ဆန်သတ်လိုက် တဲ့ကြို့ပင်ကောက်မှာ အကြီးအကျယ်ဖြစ်တဲ့လူသတ်မှုကCovid19သံသယရှိနိုင်တယ် ဆိုပြီးသတင်းပေးလို့ရန်ဖြစ်ရာမှအစပြုပြီး ငွေချမ်းသာသူမောင်အေး အဖွဲ့ ကရာအိမ်မှုးအိမ် သို့ အုပ်စုလိုက်ဝင်ပြီးဓားများနဲ့ ခု တ်ရာမှရာအိမ်မှုး ၏ မိသားစုဝင် တစ်ဦးသေဆုံးပြီး နှစ်ဦးမှာဒဏ်ရာများ များပြားစွာရရှိသွားတဲ့ဖြစ်ရပ် တစ်ခုမှာ၅-၄-၂၀၂၀ ည၇နာရီအချိန်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ်-
ကြို့ပင်ကောက်မြို့ ရွာမမြောက်ရပ်ကွက် ကံညီနောင်လမ်းရှိ ရာအိမ်မှုး ဦးဘာဘူလေးအိမ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်-ဖြစ်ပွားရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ၎-၄-၂၀၂၀နေ့ ညနေပိုင်း တွင်ကြို့ပင်ကောက် အနောက်မြောက် ရပ်ကွက် အနောက်လမ်းမတော်လမ်း တွင်နေထိုင်သူဦးမောင်အေး ပိုင်ဆိုင်သော သုခစံ တည်းခိုခန်းမှ မန်နေဂျာသည်ကိုယ်ပူ ချောင်းဆိုးသဖြင့် ၎င်း တည်းခိုခန်းအနီးရှိဆေးဆိုင်တွင် ဆေးဝယ်ရာ မှ ဆေးဆိုင်ပိုင်ရှင်မှcovid သံသယရှိသဖြင့်ရာအိမ်မှုဦးဘာဘူလေးထံအကြောင်း
ကြားခဲ့ရာဦးဘာဘူးလေး မှတည်းခိုခန်းသို့လာရောက် စစ်ဆေးခဲ့သည် ကို တည်းခိုခန်း ပိုင်ရှင်ဦးမောင်အေးမှအငြိုးထားကာ ၎င်း၏လူမိုက်တစ်ပည့်အဖွဲ့၂၀ဦးခန့်ကိုခေါ်ပြီး ဓားရှည်များ ကိုင်ဆောင်၍၅-၄-၂၀၂၀နေ့ည၇နာရီအချိန်ခန့်တွင်ရာအိမ်မှုးဦးဘာဘူလေးအိမ် သို့ သွားရောက် ၍ ရာအိမ်မှုးဦးဘာဘူလေးနှင့်မိသားစုများကိုဓားနဲ့ခုတ်ရာရာအိမ်မှုး ဦးဘာဘူလေး နှင့်ဇနီးနဲ့ သမီးမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီး
ရာအိမ်မှုး၏ ခယ်မနှင့် တူဖြစ်သူတို့မှာ ဒဏ်ရာရရှိပြီး တူဖြစ်သူ မှာ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံး ခဲ့ပါသဖြင့်ကြို့ပင်ကောက် ရဲစခန်းသို့ ရာအိမ်မှုး ဦးဘာဘူလေးက တိုင်ကြားသဖြင့်စခန်းမှ အမှုဖွင့်ပြီးစစ်ဆေးသော်လည်း လူသတ်သူခေါင်းဆောင် ဦးမောင်အေးနှင့် အဖွဲ့ကိုဖမ်းဆီးခြင်း မပြုလုပ်နိုင်သေး ပါကြောင်းသိရှိ ရပါသည်-
Nay pyi taw hot news agency အဖွဲ့မှကွင်းဆင်းမေးမြန်းရာ လူသတ်သူ တည်းခိုခန်း ပိုင်ရှင်ဦးမောင်အေးမှာငွေချမ်းသာပြီး လူမိုက်တစ်ပည့်များ များစွာမွေးထားကြောင်း-မြို့ခံများ မှပြောပြချက်အရကြို့ပင်ကောက်မြို့တွင် တည်းခိုခန်းနှင့်လောင်းကစား လုပ်ငန်းလုပ်သူဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်-
ဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုအသေးစိတ် သိလိုပါကကြို့ပင်ကောက်မြိ့ ရွာမ ရပ်ကွက်ရာအိမ်မှုး ထံဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြပါကြောင်း
crd : Nay pyi taw hot news agency
Covidလူနာ ဟုတျမဟုတျ မေးတဲ့ ရာအိမျမှုး မိသားစု ကို ဓားနဲ့ခုတျလို့သရေတျ- ယုတျမာခကျြဗြာ အနိုငျကငျြ့ လူသတျမှုမှာ သတျသူမောငျအေး ကိုဘာ့ကွောငျ့ မဖမျးတာလညျး ဆိုတာမွို့ လူထုကမေးနကွေ ပါပွီ—ငှရှေိရငျ လူသတျ လို့ရပါလား ….
ငှခေမျြးသာသူက လူမိုကျ ဆနျဆနျသတျလိုကျ တဲ့ကွို့ပငျကောကျမှာ အကွီးအကယျြဖွဈတဲ့လူသတျမှုကCovid19သံသယရှိနိုငျတယျ ဆိုပွီးသတငျးပေးလို့ရနျဖွဈရာမှအစပွုပွီး ငှခေမျြးသာသူမောငျအေး အဖှဲ့ ကရာအိမျမှုးအိမျ သို့ အုပျစုလိုကျဝငျပွီးဓားမြားနဲ့ခု တျရာမှရာအိမျမှုး ၏ မိသားစုဝငျ တဈဦးသဆေုံးပွီး နှဈဦးမှာဒဏျရာမြား မြားပွားစှာရရှိသှားတဲ့ဖွဈရပျ တဈခုမှာ၅-၄-၂၀၂၀ ည၇နာရီအခြိနျကဖွဈပှားခဲ့ပါတယျလို့ သိရှိရ ပါတယျ-
ကွို့ပငျကောကျမွို့ ရှာမမွောကျရပျကှကျ ကံညီနောငျလမျးရှိ ရာအိမျမှုး ဦးဘာဘူလေးအိမျမှာဖွဈပှားခဲ့သညျ-ဖွဈပှားရသညျ့အကွောငျးအရငျးမှာ၎-၄-၂၀၂၀နေ့ ညနပေိုငျး တှငျကွို့ပငျကောကျ အနောကျမွောကျ ရပျကှကျ အနောကျလမျးမတျောလမျး တှငျနထေိုငျသူဦးမောငျအေး ပိုငျဆိုငျသော သုခစံ တညျးခိုခနျးမှ မနျနဂြောသညျကိုယျပူ ခြောငျးဆိုးသဖွငျ့ ၎င်းငျး တညျးခိုခနျးအနီးရှိဆေးဆိုငျတှငျ ဆေးဝယျရာ မှ ဆေးဆိုငျပိုငျရှငျမှcovid သံသယရှိသဖွငျ့ရာအိမျမှုဦးဘာဘူလေးထံအကွောငျး
ကွားခဲ့ရာဦးဘာဘူးလေး မှတညျးခိုခနျးသို့လာရောကျ စဈဆေးခဲ့သညျ ကို တညျးခိုခနျး ပိုငျရှငျဦးမောငျအေးမှအငွိုးထားကာ ၎င်းငျး၏လူမိုကျတဈပညျ့အဖှဲ့၂၀ဦးခနျ့ကိုချေါပွီး ဓားရှညျမြား ကိုငျဆောငျ၍၅-၄-၂၀၂၀နညေ့၇နာရီအခြိနျခနျ့တှငျရာအိမျမှုးဦးဘာဘူလေးအိမျ သို့ သှားရောကျ ၍ ရာအိမျမှုးဦးဘာဘူလေးနှငျ့မိသားစုမြားကိုဓားနဲ့ခုတျရာရာအိမျမှုး ဦးဘာဘူလေး နှငျ့ဇနီးနဲ့ သမီးမှထှကျပွေးလှတျမွောကျသှားပွီး
ရာအိမျမှုး၏ ခယျမနှငျ့ တူဖွဈသူတို့မှာ ဒဏျရာရရှိပွီး တူဖွဈသူ မှာ ပှဲခငျြးပွီးသဆေုံး ခဲ့ပါသဖွငျ့ကွို့ပငျကောကျ ရဲစခနျးသို့ ရာအိမျမှုး ဦးဘာဘူလေးက တိုငျကွားသဖွငျ့စခနျးမှ အမှုဖှငျ့ပွီးစဈဆေးသျောလညျး လူသတျသူခေါငျးဆောငျ ဦးမောငျအေးနှငျ့ အဖှဲ့ကိုဖမျးဆီးခွငျး မပွုလုပျနိုငျသေး ပါကွောငျးသိရှိ ရပါသညျ-
Nay pyi taw hot news agency အဖှဲ့မှကှငျးဆငျးမေးမွနျးရာ လူသတျသူ တညျးခိုခနျး ပိုငျရှငျဦးမောငျအေးမှာငှခေမျြးသာပွီး လူမိုကျတဈပညျ့မြား မြားစှာမှေးထားကွောငျး-မွို့ခံမြား မှပွောပွခကျြအရကွို့ပငျကောကျမွို့တှငျ တညျးခိုခနျးနှငျ့လောငျးကစား လုပျငနျးလုပျသူဖွဈကွောငျး သိရှိရပါသညျ-
ဖွဈစဉျအမှနျကိုအသေးစိတျ သိလိုပါကကွို့ပငျကောကျမွိ့ ရှာမ ရပျကှကျရာအိမျမှုး ထံဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျကွပါကွောငျး
မှော်ဘီမြို့နယ် ဆပ်သွားတော ကျေးရွာ အသက်( ၁၄ )နှစ် အရွယ် (၈)တန်း ကျောင်းသားလေး တစ်ဦး ကြိုးဆွဲချသေဆုံး
သမ္မတဖြစ်ခွင့် ၅၉ ( စ ) အပါဝင် ကျန်ပြင်ဆင်ချက် အားလုံး (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းမကျော် ၍ မူလအတိုင်းထားရှိ
ကိုဗစ် အတည်ပြုလူနာ ( ၉ ) ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိ , စုစုပေါင်း ( ၁၀၇ ) ဦး ရှိလာ …ရာဂဏန်း စတင်လာပါပီ..